Xaalada Israel iyo Gaza ayaa saaka degan kadib markii ay wada gaareen heshiis xabad… – Hagaag.com
Xaalada Israel iyo Gaza ayaa saaka degan kadib markii ay wada gaareen heshiis xabad…
Posted on 21 Maajo 2021 by Admin in World // 0 Comments
Waxaa saaka degan xaaladda Israel iyo Marinka Gaza, ka dib markii Ururka Xamaas iyo Israel ay wada gaareen heshiis xabad joojin ah.
Dowladda Masar oo heshiiskani garwadeen ka ahayd ayaa wafuud dhanka ammaanka ah u direysa Gaza iyo Israel, kuwaa oo korjoogto ka noqonaya heshiiska.
Labada dhinac ayaa siyaabooyinka kala duwan u sheegay inay aqbaleen heshiiskaasi xabad joojinta, isla-markaana ay u hoggaansamayaan.
Xabad joojinta ayaa dhaqangashay sideedii saac ee subaxnimo, ka dib kow iyo toban maalmood oo Israel ay duqayn xoog lihi ku haysay Marinka Gaza iyo gantaalo ay xoogaga Xamaas u ridayeen dhanka Israel.
Duqaymaha labada dhinac ayaa galaaftay nolosha in ka badan 240 qof oo badankood ay ku dhinteen Gaza.
Dhanka kale Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden ayaa soo dhaweeyay heshiiska xabad joojinta, ee ay dhinacyadaasi wada gaareen.
“Kow iyo tobankii maalmood ee la soo dhaafay lix jeer waxaan la hadlay Ra’iisal Wasaare Netanyahu, sidoo kale waxaan la hadlay Madaxweynaha Maamulka Falastiin, Mahmoud Abbas, hadafkayaguna wuxuu ahaa in dadaalada diblomaasiyadeed aan qayb ka noqono. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan laamaha Mareykanka ee ka qayb qaatay in natiijadan la gaaro.” Ayuu yiri Madaxweyne Biden.
Biden ayaa yiri “Saacad saacad ayaan ula xiriireynay Madaxda Masar, Falastiin iyo Madaxda kale ee Bariga Dhexe. Mahadcelin gaar ahna waxaan u dirayaa Madaxweynaha Masar el-Sisi iyo masuuliyiinta sare ee dalkaasi, ee doorka muhiimka ah ka qaatay guushaan diblomaasiyadeed. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dalalka kale ee gobolka oo kaalin ku lahaa.”
Biden ayaa ugu dambeyn yiri “Waxaan tacsi tiiraanyo leh u dirayaa qoysaska Israel iyo Falastiin ee kuwii ay jeclaayeen ku waayay dagaalka, dadka dhaawacmayna waxaan u rajeynayaa inay ka soo kabtaan.